Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Free patrick gum ja li
at 4/01/2016 09:32:00 AM
Free at last! Free at last! My God he is free.
Free: (က) လွတ်လပ်သော။ ပွင့်သော။ ရှင်းသော။ လွတ်သော(မငြသော)။ လွတ်ငြိမ်းသော။